साउदी राजधानी रियादमा सरकारले दूूतावासका लागि जग्गा खरिद गर्दै
काठमाडौं। साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा खरिद गर्न लागिएको छ। साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतले जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्। जग्गा नेपालले साउदी सरकारसँग जी-टू-जी माध्यमबाट खरीद गर्न लागेको उनले बताए। रियादस्थित ८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलको कूटनीतिक क्वाटरभित्र जग्गा किन्न लागिएको हो। सो स्थानमा हाल ७५ देशका दूतावास छन्।
साउदी अरेबियाले हटायो विदेशी उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध
१९ पुस, काठमाडौं । साउदी अरेबियाले गत डिसेम्बरमा लगाएको अस्थायी यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ । साउदीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) मुलुकमा फैलिन नदिन विदेशी उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । आइतबार साउदी गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध हटेको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार साउदीले लगाएको हवाई, जमिन तथा समुद्री मार्ग हुँदै मुलुक […]